Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) Nzuzu Ugbo - Phcoker
Ibutamoren Mesylate (MK677) ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka MK677, MK-677, MK-0667, na L-163,191, ...... ..
Mw677) ntụ ntụ (159752-10-0) video
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) ntụ bụ ọgwụ nke na-eme dị ka ihe dị ike, na-arụ ọrụ nke ọma na nzuzo, na-eme ka ọrụ GH na-akpali akpali nke hormone ghrelin. E gosipụtara ya iji mee ka ntọhapụ nke, na-arụpụta mmụba dị elu n'ọtụtụ ọkwa plasma nke ọtụtụ hormones gụnyere hormone growth na IGF-1, ma na-enweghị emetụta ọkwa cortisol. Ọ na-eme ugbu a ka ọ bụrụ mmepe dịka ọgwụgwọ nwere ike iji mee ka ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị okenye tozuru etozu, dịka nke na-eto eto na-eto eto ma ọ bụ ndị toworo eto, na ọmụmụ ụmụ mmadụ egosila na ọ ga-eme ka nkwonkwo akwara na ọkpụkpụ ịnweta ọkpụkpụ mee ka ọ bụrụ ọgwụgwọ maka na-agwọ ndị na-adịghị ike. MK-677 ntụ ntụ na-agbanwekwa metabolism nke anụ ahụ ma nwee ike ịnwe ngwa na nhazi oke.
Mw677) ntụ ntụ (159752-10-0) Smmezi
Product Name Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) ntụ ntụ
Chemical Aha MK-677;2-Amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate;
Klaasị ọgwụ ọjọọ Ntụ ntụ MK677
molekụla Fnhazi C27H36N4O5S.CH4O3S
molekụla Wasatọ 624.768 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 624.229 g / mol
Melting Point 161 ka 315ºC
ObụpdeING Point 868.9 ° c na 760 mmhg
Sume H2O: soluble5mg / mL, doro anya
Na-akpọ Mesylate Antinye Ihe na-emepụta ọgwụ nke hormone nke na-eto eto; na-agbanwe usoro mgbochi ahụ nke anụ ahụ; mee ka akwara abuo na akuku onu ogugu buru ibu; na-agbanwe ụbụrụ nke anụ ahụ
Mw677) ntụ ntụ (159752-10-0)
Ibutamoren mesylate (nke a makwaara dị ka ibutamoren ma ọ bụ MK677), na-akwalite skepụ nke hormone nke na-eto eto (GH) ma mee ka mkpụrụ ndụ insulin dị ka 1 (IGF-1).
Ihistamoren mesylate na-eme ka ogo homone na-eto eto site n'igosi ihe nke hormone ghrelin ma kee ya na otu n'ime ndị nabatara (GHSR) n'ime ụbụrụ. GHSR arụ ọrụ na-eme ka e nwee mmụba nke mkpụrụ ndụ nke ụbụrụ.
GHSR dị n'ụbụrụ ụbụrụ nke na-achịkwa agụụ, obi ụtọ, ọnọdụ, ụbụrụ, ncheta, na cognition. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya na ibutamoren mesylate nwekwara ike imetụta ọrụ ndị a. Otú ọ dị, ọ dị ugbu a, nchọpụta ahụike na-akọwa nanị mmetụta ibutamoren mesylate nwere na agụụ - na dịka a na-atụ anya, dịka ghrelin, ibutamoren mesylate na-eme ka ọ dịkwuo elu.
Ihe dị ukwuu banyere ibutamoren mesylate bụ na ọ na - eme ka ogo homone mụbaa na obere ma ọ bụ enweghị mmụba na homonụ ndị ọzọ, dị ka cortisol. Cortisol na-egbochi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, na-ebelata mmerụ ahụ, na-egbochi ịmụ ihe na ebe nchekwa, ọ naghị adịkarị mma ka ewelite hormone a.
Mw677) Nzuzo (159752-10-0)
Ibutamoren mesylate (nke a makwaara dị ka ibutamoren ma ọ bụ MK-677), na-akwalite skepụ nke hormone nke na-eto eto (GH) ma mee ka mkpụrụ ndụ insulin na-akpata 1 (IGF-1).
Uru nke Mw677) ntụ ntụ (159752-10-0).
♦ MK677 nwere ike inye aka na njedebe okpu
♦ MK677 nwere ike inye aka mee ka ọganihu nke ọkpụkpụ
♦ MK677 nwere ike inye aka belata nhụcha ahụ
♦ MK677 nwere ike inye aka na ụra
♦ MK 677 nwere ike ibelata nsogbu nke ịka nká
♦ MK677 Nwere Ike Nwee Nootropic Effects na Brain
Na-atụ aro ka a na-eme ka mpempe Mesylate (MK677) na ntụ (159752-10-0)
Dabere na nchọpụta, 20 ka 30mg yiri ka ọ bụ usoro kachasị mma. Enwere akụkọ gbasara ndị mmadụ na-ewere karịa 30mg nke MK677 n'ụbọchị, mana ọ naghị arụpụta nịpụta kacha mma. Kedu ihe dị mkpa karịa usoro onu ogugu bu ogologo oge.
Ọ dị oke mkpa na MK677 kwesịrị iji oge dị ogologo karị. Mkpụrụ nke hormone na-eto eto ga-eji nwayọọ nwayọọ na-ewuli elu n'ime ahụ gị, nke nwere ike iwepụta izu ole na ole tutu ịmalite inwe mmetụta ndị ahụ.
Mmetụta nke ụrọ (MK677) ntụ ọka nke Raw Ibutamoren (MNXXX-159752)
MK677 adịghị emepụta ọtụtụ mmetụta dị iche iche maka ndị ọrụ ya na-echegbu onwe ya, mana ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịnwe mmetụta ụfọdụ dị iche iche iji chọpụta. Ndị na - adịghị ahụ maka insulin ma ọ bụ ndị nwere ọrịa shuga nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ mgbe ị na - ewere MK677. Mgbaàmà ndị metụtara ọnọdụ ndị a nwere ike iwepụkwuo site na iji MK677. N'izo aka na nchọpụta a kpọtụrụ aha na mbụ, ndị okenye ndị nwere obi obi n'oge gara aga nwere ike ịda mbà n'obi mgbe ha na-eji MK677. N'ebe ndi ozo di ocha, o yiri ka enweghi ihe ojoo ojoo a choputara, mana ichoputa ihe omumu mgbe nile iji kwado ndi ahu.
Nwunye N-Methyl-D-aspartic (NMDA) ntụ ntụ (6384-92-5)